रामलीलाको सन्देश | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानहरुमा राम लीला मञ्चन भइ राखेका हुन्छन् । छिमेकि देश हिन्दुस्तान त राष्ट्रव्यापी रुपमा प्रतिध्वनित हुने गरेका दृश्य सहजै देखिन्छन् । यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नपर्ने खास प्रयोजन अनुभुति भयो । प्रायः यस्ता स्थानहरुमा कथित धार्मिक कृत्य यज्ञ मन्दिरहरुमा जाने कमै इच्छा रहन्छ । नैतिक र सामाजिक बाध्यता अलगै हुन सक्छ । अकस्मात यस्तो मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले कुन धरातलमा प्रस्तुत विषय उठान गरे त्यसको खुलासा विश्लेषण आवश्यक लागेको छ ।
०७४ कार्तिक १ गते शुभ दीपावलीको दोश्रो दिन महेन्द्रनगर खुलामञ्चमा सञ्चालित रामलीला महोत्सवका महासचिव श्री शमरजंग बहादुर चन्दले साझँ रामलीला मञ्चन स्थानमा आउन आमन्त्रित गर्नु भयो । इन्कार गर्न नसकि साझँ त्यहाँ गए । मानव मन कति गतिशील हुन्छ भन्ने अनुभव त्यस पवित्र स्थलमा पुग्दा भयो । मानव सागर अनुशासित रुपमा जमा हुदै बस्दै गरेको र ९ बजे सम्म त लगभग दशैं हजार नर–नारी भेला भइ शान्त पूर्वक उत्सुकताका साथ प्रतिक्षारत थिए । त्यहाँ औपचारिक कार्यक्रम सभापति, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत विभिन्न नर–नारीका नाम उद्घोषकबाट प्रसारित भइ राखेका थिए । विशाल मानव सागर अनिच्छित रुपमा पनि शान्त भएर देखि सुनि रहेका थिए । मलाई बोल्न आह्वान गरियो । झण्डै ४४ वर्ष देखि वक्ता कै व्यवसाय, हजारौं सभा समारोहहरुमा देश र विदेश पाश्चात्य मुलुकहरुमा समेत धारा प्रवाह बोल्न आत्मविश्वास भएको व्यक्तिमा ग्लानि भएको अनुभव गरे ।
यसको खास कारण थियो व्यवसायिक जीवनमा पनि मानव मनोविज्ञान जान्न बुझ्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । अन्यथा कानून व्यवसाय धराशायी हुन पनि निश्चित रहन्छ । मैले के बुझि रहेको थिए भने हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक परम्परागत मुल्य मान्यताहरुलाई नाटक कै रुपमा भएपनि प्रत्यक्ष देख्न सुन्न चाहने अभिलाषा त्यस मानव सागरमा थियो । कुनै भाषण मुख्य वा विशिष्ट अतिथि वा अन्य क्रियाकलाप प्रति अभिरुचि हुने सवाल नै थिएन । तथापि पवित्रताले परिपूर्ण विशाल मानव समाजबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया माझ केही व्यक्त भएन । शान्त पवित्र हृदयले निशब्द सुनी रहेको देख्दा रामलीला मञ्चनले दिएको सन्देश जुन मैले बुझ्न सके, सामयिक प्रसंगहरुबाट विषयान्तर गरी लेख नै परिवर्तन गरी प्रस्तुत विषय अभिव्यक्त गर्न आवश्यक लागेको छ ।
कुनै पनि समाज र राष्ट्रको मुलमा संस्कृति मुल्य मान्यता रहन्छन् । अन्तर हृदयले मानवहरु यसलाई श्रद्धा गर्छन् । लादिएको वा बाध्यता वश नभएर स्वतः स्फूर्त रुपमा पवित्रता र कर्तव्य बोध भएको देख्दा केही सोच्न बाध्य पार्दछ । असंख्य नर–नारी, बाल बृद्धहरुको अनुशासित भिड पूर्णतः मर्यादित नियन्त्रित र पवित्रताले भरिएको थियो । त्यसैले त खान विश्रामको समय छोडेर पनि टाढा–टाढाबाट जमा भएका थिए । अकस्मात मनमा विचार आएको छ, देशको भाग्य निर्धारण गर्न भनेर विधाता, नियन्ता बनेका नेताजीहरुका वाणी क्रियाकलापहरुका लागि पनि त्यस्तै मानव सागर भेला हुन संभव रहला ? भाषण गर्ने बेला लगभग सभा स्थल खाली हुदै जाने एक सीमा सम्म सहन सकिन्थ्यो तर भत्ता बुझेर हाजिर लगाई महत्वपूर्ण कानून बनाउने बखत कोरम नपुगी सार्वभौम संसद अवरुद्ध भएका, अनेक सुविधा र स्वार्थका लागि तालाबन्दी, तोडफोड, हिंसा गर्ने कार्यहरु देशका लागि सामान्य भइसकेका छन् । समाज प्रति दायित्व बोधको सर्वथा अभाव छ । नेता शब्द अब अपमान सूचक हुदै गएको छ र मत माग्न वा भेला हुनका लागि पनि भोजभतेर, भारी खानपिन, रकम कलमका व्यहोरा खुलस्त हुने गर्दछन् । अब त कानूनी रुपमा समेत निर्वाचनमा २५ लाख खर्च गर्न पाउने छुट छ । यसको अर्थ जनताको प्रतिनिधि हुनका लागि धनाड्य हुन आवश्यक बनाइएको छ । निर्वाचन त कतिपयका लागि खानपिन कमाइको श्रोत नै बन्दै गएका छन् । टिकटका लािग रकम दौडधूप के जनताको सेवा कै लागि हो त ? आजको समय सन्दर्भले यो गहन चिन्ता धेरै आवश्यक भइसकेको छ ।
रामलीला मैदानमा उर्लेको मानव सागर कुनै नेता दलका लागि पनि निश्वार्थ अनुशासित र शान्त भएर उपलब्ध होला ? चमत्कारी व्यक्तित्व भएका नायकहरु वास्तविक रुपमा देखा पर्लान् कि ? सभाबाट उठेर जानको साटो अझै लम्बिए हुन्थ्यो भन्ने भावना जगाउन कथित नेताहरु सफल होलान् कि ? रामलीला स्थलमा झण्डै २ घण्टा बसेर राति साढे १० बजे मात्र घर पुगेको मेरो मानसिकता कुन तत्वले नियन्त्रित र आकर्षित गरेको होला त्यसैको चिन्तन गर्दा गर्दै ध्यान मग्न भएछु पत्तै पाएन । संभवतः रामलीलाबाट प्रवाहित सन्देश भित्र यस्तै पवित्र तत्व रहे होलान् । आयोजक र खास
गरी आमन्त्रित गर्ने शमर प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । निरपेक्ष मनस्थितिको व्यक्तिलाई भुमिका भएपनि रुपान्तरित भएकै रहेछु भन्ने पवित्र अनुभुति व्यक्त नगरी रहन सक्तैन ।
← बेगम हजरत महलको नेपाल निर्वास
नेता देखि प्रकृति सम्म ! →